Eenyutu Dogongoraa Jira? |
Home Afaan Oromoo Eenyutu Dogongoraa Jira?
OPDOn kan handhuuramte namoota sab boonummaa Oromoo qabaniin utuu hin taane diinni Uummata sab boonummaa Oromoo ittiin cabsuu aboomuuf akeekkatee ijaarate akka tahe xiqqaa fi guddaan Oromoo akka hubatuu fi fudhate mamii hin qabu. Kana jechuun namani sab boonnummaa Oromoo qabu miseensa OPDO hin tahu jechuu miti. Akka ijaarsaatti OPDOn meeshaa diinaaf dhimma baasu qofa. Qajeelfamni OPDO uummata Oromoo facaasuu fi mancaasu akka taate jala murree, yaroo dhumaaf irratti tumnee bira darbuu qabna.
Dogongorri tokkoffaan warra qabsoo bilisummaa saba Oromoof dhaabbanne jennu OPDOn gara bilisummaa haa tahu gara sirna ilaa fi filaamee nu ceesifti jennee fudhachuu dha. Qeerroo fi Qarreen Oromoo harka qullaa dhiiga isaanii dhangalaasanii lafee isanii caccabsanii waraana Wayyaanee injifatanii biyya bulchuu OPDOf imaana laatachuun akeeka karaa irraa maqe. Kan wagga 27 Wayyaaneef meeshaa tahee Uummata Oromoo dhiiga dhugaa ture OPDO tahuu utuu beeknuu maaliif aangoo badhaasuun barbaachisaa tahe? OPDOn gararrummaa Wayyaanee jalaa gara garrumma nafxanyaatti nu ceesisuuf dhamaa jirti.
OPDOn har’a abbaa aangoo taatee horii uummatan namoota bittee Uummata Oromoo gandaan, lagaan amanitin gargar qoodee aangoo irraa turuuf hammeenya takkaa argamee fi dhagamee hin beeknee halkanii fi guyyaa dalagaa jirti. Qeerroo fi Qarreen Oromoo kaayyoo fi akeeka qaban biratti naamusa warraaqsaa qabu. OPDOn garuu warra fallaa Qeerroo fi Qarree Oromoo tahan ijaarratee qabsso uummata keenyaa booresuuf socho’aa jirti. Qeerroo fi Qarreen Oromoo ilkee (hadhaa) OPDO kana of keessaa buqqisuu qabu.
Inni lammaffaa Kononeel Abiyi utuu inni gaaf tokko dagatee ani Oromoo dha hin jedhiin “ilmi Abbaa Gadaa Masaraa Miniliki”seenee jechuun waan sammuu nama nyaatu. Sana irra darbee Jawwar Mohammed namni ilmaan Oromoo kabajaa fi abdii guddaa irraa qabu Oromoon bilisoomee jira jechuun yakka nama leeyaasisuu fi nama rifachiisu ture. Dantaa mataa ofiif guutachuuf jecha dogogoruuf haala hubachuu dadhabuu irra kan ka’e dogongoruun walii adda. Ijoolleen Oromoo qabsoo bilisummaa kana keessatti dhalatanii guddatanii bilisummaan maal akka tahe hin beekan jechuun nama rakkisa.
Inni sadaffaan dhugaa dubbachuu fi dhugaaf dhaabbachuun qaqallachuu irra darbee dhabamaa jira. Sirni Gadaa uummatni keenya ittiin boonuuf kan wiirtu tahe dhugaa dubbachuu fi dhugaa dhaabbachuuf soba lagachuu dha. Bara kana OPDOn horiidhaan warra Abbaa Gadaa iyyuu Abbaa Garaa gootee waan ofii barbaadu hojjechiisaa fi dubbachiisaa jirti. Uummatni Oromoo haala kana hatattamaan akka dhaabbatu gochuu qaba. Dhaloota boruuf gonaadisaa keenyee darbuu hin qabnu.
Kononeel Abiyi kan kunuusisee guddifate Habashoota. Yaroo humni Wayyaane buqqa’uu Obbo Lamma Magarsaa Muumicha Ministeera akka taane shirri kan irratti raawwatameef waan sab boonummaa Oromoo qabuuf. Innis akkauma OPDO hundaa Impaayeraa Itoopiyaa ni jaalata ture. Waan sab boonummaa Oromoo qabuuf akeeka nafxanyootaa bakkaan gahuu akka hin dandeenye waan hubataniif aangoo isa dhowwatan. Sunuu xiqaatee Kononeel Abiyi immoo bulchaa Oromiyaa tahuu iyyuu irraa mulqe.
Kononeel Abiyi gaafa aangoof muudamu kan nan hojjedha himate bareechee hojjechaa jira. 1) “Haatii koo yaroon ijoollee ture Mootii taata” nan jettee ture jedhe. Muumicha Ministeerummaa bira kutee “Mootii” tahuuf of qopheessaa jira. 2) “Hawwiin koo akeeka Miniliki bakkaan gahuu dha” jedhee waltajii irratti himate. Utuu oolee hin bulle namni milliyoonaan lakkawwamu bakka qubatu dhabee beelaa fi dhukkubaan dhumaa jiruu maalqa milliyoona hedduu lakkawwamu baasee Masaraa Miniliki haarofatee jira. Warra Mootii tahuu isaaf gufuu tahu jedhee yaadu tokkon of jalaa carabaa itti fufeera.
Kononeel Abiyi nama sobdee fakkeessitu akka tahe namni hin habatne hin jiru. Jeneraal Saaree Mokonoon kan ajjeesise isa. Gaafa Jaarsi Abbaa isaati jedhan (inni abbaa koo jedhee hin beeku) boqotan manaxarii isaa guraachaa kan gaafa gaaduu fi gantuu (spy) tahee ilmaan Oromoo mana amantii wangeelaa irratti hojjechaa turee ija isaa dhokfatee xonoqaa ture. Garuu gaafaa Jeneraal Saareen du’e akka dhaa’ima haati irraa duutee furrii harcaasaa boo’aa ture. Namni akkasi boo’uuf kun maal haa tahu jedhee jeneraala akkasi jaalatu kana ajjeessa jennee akka yaadnuuf fakkeessaa jira.
Utuu akka irratti qopheessee deemeen milkaa’eef Jawwar Mohammed ajjeessamee jiraatee kan nama hundaa dura ‘yaa obboleessa koo si nyaatanii” jedhee Ruashaa irraa boo’aa dhufu isa. Waan fakkeessuu beekuuf na irra fokkisa jedhee hin yaadu. Akkuma namoota Jawwaar duraa ajjeefamanii warra badii kana fakkaatu hojjete qorannee uummataa ifa goone jedhee deema.Sana booda waan qoratamuus, kan uummataa ifa tahus hin jiru. Waan guyyaa tokko dura mana parlamaa keessatti dubbate akeeka Jawwariif qabu ifatti isa saaxila. Utuu dhiiga boo’ee iyyuu karaa koo irraa hin fudhadhu.
Qabsawwaan Oromoof amma har’a hin kan galleef waa’ee RIB fi Masaraa Miniliki. Namni Masaraa Miniliki gallee RIB akka ashkaree ergachu akka danda’u bareechee kan beeku nafxanyoota qofa. Biyya lafaa kana irratti RIB uummata isaa hin ajjeessu. Kan kakuu seenuu daangaa fi uummata biyya isaa eeguuf malee mootummaa eeguuf hin ture. Kan Impaayeera Itoopiyaa adda. RIB jedhu kan uummata biyya isaa fixxu tahee agarra. Warri nafxanyaa kan Masaraa Minilki galuuf gagabaa jiran waan haala kana hubatanii jiraniif. Har’a huduu Kononeel Abiyi jala gugguufanii Masaraa Minilki galuuf ayyaana argatanii jiru. Kononel Abiyiin irraa darbanii dhuufachuuf halkan tokkotu isaan gaha. Garuu isa meeshaa godhatanii humna Oromoo cubsuun waan dursuuf isa eegaa jiru.
Kononeel Abiyis tahe nafxanyoonni Oromoo fi uummata Impaayeera Itoopiyaa Milliyoona jaatama fixanii yoo aangoo Itopiyyaa tokko gochuu argatan dhima isaanii miti. Obbo Jawwaar baga Rabbi ayyaanni Uummata Oromoo lubbuu kee olshe. OMN ijaa fi gurraa Uummata Oromoo tahee jira. Akka nama tokkotti uummatni kee dhiiga isaa siif dhangalasaa jira. Cubbuu fi haqa si irraa qaba. OPDO dhiisii Uummata bal’aa Oromoo wajjin dhaabadhu. Yoo boru Kononeel Abiyi bakka Diyaaqoni Dan’eel Kibreti kootu Masaraa Minilki gali siin jedhe hin fudhatiin. Dhiigni Uummata Oromoo Boranaa, Gujii, Walloo fi Wallagaa amma har’aa dhangalaa jiru hunda keenya mararuu qaba. Uummatni Oromoo gaafa tokko tahe dhaabbate Waraana Wayyaane isa nama nyaatu haarka qulaa of irraa buqisee jira.
Har’a uummatni keenya gaachana isaa WBO of bira qaba. Qeerroo fi Qarreen Oromoo mana hidhaa seenuu irra dhagala seenutu nu baasa. Bakka WBOn hin geenyetti gurmoofne diina jalaa dhaachuu wayya. Meeshaa waraana karaa dandeenyuun saamane of irraa ittisuun nu barbaachisa. Ilmaan nafxanyaa Kononeel Abiyiin of dura qabanii uummata keenya lafa irraa haxaa’uuf qophii guddaa qabu. Badii kana irraa dandamachuuf of qixxeessuun dirqama keenya. Kaayyoo fi akeeka qabsoo keenyaa deemuu malee namni tokk yaroo barbaadu kaa’aa yaroo barbaadu taa’ee kan jedhuu yoo kan deemnu tahe gaagama guddatu uummtaa fi biyya keenya irraa gahuu danda’a. Amma diinni of ijaaree lafa irraa nu haxa’u yaroo kenuuf hin qabnu.
Injifannoo Uuummata Oromoof!
Previous articleAdoptive Parent (OPDO) Ill-treated Adopted Child (Jawar)
Next articleThe Statement of the Office of the Prime Minister on the Recent Unrest in Oromia: Few Points of Concern
Diino Tanki November 20, 2019 At 1:17 am
Reeffa Nama Ofii 7 Garagalchu Jedhan. WBO Tahe Jedhanii Jarri TPLFn Bocce Tun Waan Gaafii Bu’uraa Gaafatan Qofaaf Maqaa #shifttummaa Itti Moggaasani Ololaafi Waraanaan WBO BALLEESINA Ja’ani Fiiguun Habashoota Hidhachisaa Ifaan Ifatti Imala Jaraa Akeeka.